HEROES (Part IV)
Apr 24, 20193min read Special Collection
ဒီဘဲကိုတေ့ာ သူရဲကောင်းလို့မြင်မိတာထက် အားအကျဆုံး ဇာတ်ကောင်လို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ယောကျ်ားလေးတွေ အားကျမယ်ဆိုရင်လည်း အားကျချင်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေ။ လောင်းကစားပိုင်းဆိုလည်း ကျွမ်းတယ်။ ယမကာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း သူမသိတာ မရှိ။ ကမ္ဘာ့ရန်သူတော်ကြီးတွေနဲ့တွေ့လည်း သူပဲ အမြဲအနိုင်ရတယ်။ အသက်ဘေးအန္တရယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လည်း ကျန်သူတွေထက် သူကအမြဲလိုလို လွတ်မြောက်တယ်။ တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်ကလည်း သာလွန်းတဲ့အပြင် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းကလည်း ထက်မြတ်တယ်။ တစ်ကယ်ပြောတာ။ သူမသိတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ ဗဟုသုတလည်း ပြည့်စုံသလို အရိပ်အကဲ သုံးပါးစလုံးကို နားလည်ပြီးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးပဲ ရောက်နေပါစေ သူလွတ်ထွက်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင် ထူးဆန်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အမြဲကိုင်တွယ်သူတစ်ယောက်ပေါ့။ သူ့အစွမ်းတွေကတော့ ပြောရင်ကုန်မယ်တောင် မထင်ဘူး။ သေနတ်ပစ်တာတွေ ကားမောင်းတာတွေအစ နောက်ဆုံး ရောက်ရအရပ်တွင် မိန်းမရပါစေဆိုတဲ့ ဆုကိုအပြည့်ဆုံးသူ။ သူမြာပွေတဲ့ မိန်းမတိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေသူ။ James Bond တစ်ယောက် Friendzone ထဲကို အထည့်ခံရတာတွေ အငြင်းခံရတာတွေဆိုတာ တွေ့တောင်မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ဒီလောက်ထိ တော်တဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။
ဒီဇာတ်ကောင်ကို စာရေးဆရာကြီး Ian Fleming က 1953 ခုနှစ်တွင် Casino Royale စာအုပ်နဲ့ စတင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာတော့ သူ့ကို 1962 ခုနှစ်မှ Dr.No ဇာတ်ကားနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ မင်းသားကတော့ Sean Connery ဆိုတဲ့ အဲ့တုန်းက လူသိပ်မသိသေးတဲ့ မင်းသားငယ်လေး။ James Bond ဇာတ်ကားတွေကို ထိုအချိန်ကတည်းက စတင်လာခဲ့တာ ယခုဆိုရင် 54 နှစ်တောင်တိုင်ခဲ့ပြီ။ မင်းသားတွေကတော့ အလီလီပြောင်းခဲ့ကြတယ်။ ယခုတော့ နောက်ဆုံးမင်းသားသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး မင်းသားကြီး Daniel Craig ပင်ဖြစ်တော့သည်။
အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းလာသော James Bond ဇာတ်ကားတွေကို Daniel Craig ကယ်တင်ခဲ့တယ်။ သူသည်ထို ဇာတ်ကောင်ကို အဆုံးစွန်ဆုံးအခြေအနေထိ ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ်။ Casino Royale ဆိုတဲ့ 20006 ကထွက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားမှာ အရမ်းကိုတော်လွန်း တတ်လွန်းသော James Bond ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူသည်လည်း လူသားပီပီချစ်တတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ အလိမ်ခံခဲ့ရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ထိုလူသားဆန်တဲ့အချက်တွေ တင်ဆက်ပုံတွေကြောင့် Casino Royale သည် ယနေ့တိုင် ကျွန်တော့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံး James Bond ဇာတ်ကားဖြစ်နေပါတော့တယ်။
သူမကိုတော့ ကျွန်တော် သူရဲကောင်းစာရင်းတွင် ထည့်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ လူကောင်းတစ်ယောက်လို့လည်း ပြောရန်ခက်တယ်။ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Tattoo တွေထိုးထားသည့်အပြင် Piercings တွေလည်း ဖောက်ထားပြန်သေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကောင်ကိုတော့ Swedish ဂျာနယ်လစ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Stieg Larsson ဆိုတဲ့သူက ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ထိုဇာတ်ကောင်ကို သူရေးဖွဲ့တော့ သူမသဏ္ဍာန်ဟာ ပိန်ပိန်ပါးပါးပုံစံ ဖြစ်ပြီး အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ရင်လည်း Gothic ဆန်ဆန်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတတ်တယ်။ သူမကို ဘာလို့ထည့်ခဲ့ရသလဲဆိုရင် သူမရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ပဲ။ သူမကို ပြင်ပသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီး ဝေဖန်ရင်မှားသွားမှာပေါ့။ သူမမှာ ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကတော့ သူမဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီ Computer Hacker တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ကာ Harriet Vanger ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့အမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ဘာမှမပြောပလောက်ပေမဲ့ သူမကမ္ဘာလေးထဲမှာတော့ သူမဟာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးပေါ့။
ကျွန်တော် ပထမဆုံး Matrix ကားကို စကြည့်တော့ အသက်က ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်။ ဘာမှတော့ နားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့အစွမ်းတွေကို အားကျကာ အလွန်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်အဖြစ် မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။
"I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us, you're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end, I came here to tell how it's going to begin. I'm going to hang up this phone and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show themaworld...without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries;aworld where anything is possible. Where we go from there isachoice I leave to you."
လူသားတွေရဲ့အစွမ်းသတ္တိကို ဖော်ကြူးနိုင်ခဲ့စွာနဲ့စက်တွေကို ပြန်လည်ချေပခဲ့တဲ့ ဖုန်းထဲကနေပြောကြားခဲ့တဲ့ စကား။ အဆုံးကို သူဟာပြခဲ့သူမဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ အစကိုတော့ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူ။ တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ သူရဲကောင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် လူသားတွေနဲ့စက်တွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာ စက်တွေရဲ့ကြီးစိုးခြင်းကနေ ပြန်လည်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ လူသားတွေမှာတော့ Neo ဟာလည်း ဗျာဒိတ်ပေးခံရတဲ့ The One ပါပဲ။
သူဟာ Matrix နဲ့ဆက်နွယ်ထားတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော bluepills တွေထဲကတစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စသိတော့ နာမည်အရင်းက Thomas A. Anderson ပါ။ MetaCortex လို့အမည်ရတဲ့ software company မှာ Computer programmer အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့ Neo ဆိုတဲ့အမည်နဲ့သူ Hack ထားတဲ့ Programs တွေကို ခိုးရောင်းသူအဖြစ်လည်း စီးပွားရှာလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးကို သူသံသယဝင်လာတော့ Morpheus ဆိုသော လူဦးဆောင်တဲ့ လူတစ်စုနဲ့စတင်တွေ့ရှိလာခဲ့ပြီး The Matrix system ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် သူ့ဘဝရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် အရာအားလုံးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို သူသိလာခဲ့တော့တယ်။ သူရွေးခဲ့တဲ့ ဆေးလုံးဟာ အနီရောင်ဆေးလုံး။ အပြာရောင်ဆေးကို သူရွေးမယ်ဆိုရင် သူ့ပုံမှန်ဘဝကို ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဆေးကို သူရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ Wonderland ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ ပုံပြင်ထဲက Alice လို သူနေထိုင်ရာ ကမ္ဘာရဲ့တစ်ခြားတစ်ဘက် ဖြစ်ရပ်မှန်နေရာကို ရောက်ရှိမယ်လို့ဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် သူအနီရောင် ဆေးလုံးကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူဟာ ဗျာဒိတ် နမိတ်ထဲက ဒီလောကရဲ့လူသားတွေကို ကယ်တင်နိုင်မဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော လူသား ဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။
Security system ကနေ Virus ဖြစ်လာတဲ့ ရန်သူတော်ကြီး Mr. Smith နဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတွင် Smith က ပြန်လည်ခုခံတိုက်နေသော Neo ကို
လို့နားမလည်စွာ မေးခဲ့တော့ Neo က
ဆိုပြီး ဒါဟာ ငါရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး အဖြေကို ပေးခဲ့တယ်။
Theo Faron (Children of Men)
သူကတော့ သာမာန်လူတစ်ယောက်ပါ။ အရင်တုန်းကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လှုံကြွပုန်ကန်ခြင်းကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ကလေးသည် ထိုခေတ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့အတူ အသက်ဆုံးရှံးခဲ့တော့ သူဟာ သာမာန်လူသား တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ပဲနေထိုင်တော့တယ်။ သူဟာ ထိုဇာတ်ကားထဲက ကျန်ဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ လူသားမျိုးနွယ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ ကုန်ဆုံးနေတဲ့သူတစ်ယောက်။ ခေတ်ကြီးက ပျက်ဆီးခဲ့ပြီလေ။ ကပ်ဆိုးကြီးက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလွန်းတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံး တမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားရတော့မဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီး။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမျိုးသမီးများ အကုန်လုံး ကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်သည် အနာဂတ်လူသားမျိုးနွယ်စုအတွက် နိဂုံးပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော် မမျှော်လင့်စွာနဲ့ပဲ Theo တစ်ယောက် အနာဂတ်လူသားတွေရဲ့ရောင်ခြည်မျှင်တန်းလေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။ ကမ္ဘာေပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံး ကလေးမိခင်ဖြစ်သူ ကို ကာကွယ်ပေးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသောအခါ သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြန်လည် နိုးထလာခဲ့တယ်။ လူသားမျိုးနွယ်စုတွေအပေါ် သူရဲ့ယုံကြည်မှုတရားတွေပြန်လည် ကိန်းအောင်းလာခဲ့တယ်။
Theo အဖြစ် မင်းသား Clive Owen က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထို Children of Men ကိုတော့ Director Alfonso Cuarón က ရိုက်ကူးခဲ့ကာ ထိုဇာတ်ကားသည် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ 21 ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံး sci-fi ဇာတ်ကားပင် ဖြစ်သည်။
သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ သေးငယ်ချင် သေးငယ်နေပေလိမ့်မယ်။ သို့သော် သူသည်ဟာ Children of Men ဇာတ်ကား ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော သူရဲကောင်း။ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ထိုက်တန်သော သူရဲကောင်း။ အနာဂတ်လူသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက် မီးတောက်လေးကို ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ မုန်တိုင်းလေပြင်းတွေကြားမှာ မငြိမ်းသွားအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူတစ်ဦး။ သူ့ရဲ့အသက်သည် အရေးမကြီးတော့။ သူ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာသည် အနာဂတ်ရဲ့လူသားတွေပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် အထိုက်တန်ဆုံး သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပေတော့သည်။
Driver (Drive)Ryan Gosling
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Drive ဆိုသော ထိုဇာတ်ကားလေးထဲတွင် သူ့ကို ကျွန်တော်တို့Driver လို့ပဲ သိခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်အစစ်ကို မဖော်ပြသွားခဲ့။ အဖြူရောင် ပေါ်တွင် အနောက်မှာ ရွှေအိုရောက် Scorpion တစ်ကောင်ရဲ့ပုံပါတဲ့ Jacket ကို သူဝတ်ဆင်ထားတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဟန်ပန်အသွင်အပြင်ပဲ။ အေးချမ်းခြင်းတွေ တည်ငြိမ်ခြင်းတွေဟာ အပေါ်ယံဆိုပေမဲ့ အတွင်းမှာတော့ သူဟာ အလွန်ကို အန္တရယ်ရှိသူတစ်ဦး။ နေ့ဘက်တွေမှာ ကားတွေပြင်လိုက် Hollywood ရဲ့ရိုက်ကွင်းတွေမှာ Stunt driver အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်လိုက်နဲ့ညအချိန်တွေမှာတော့ ဒုစရိုက်သမားတစ်ချို့အတွက် ကားမောင်းပေးတဲ့အလုပ်ကို သူလုပ်ကိုင်တယ်။
ဘေးအခန်းက သားအမိနဲ့ခင်မင်ကာ ထိုမိန်းမအပေါ် စိတ်ယိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သူပြန်လည်ထိန်းမတ်နိူင်တယ်။ သူဟာလည်း ဒီဘဝကြီးထဲကနေ အဝေးဆုံးတစ်နေရာကို ထိုမိန်းမနဲ့ထွက်ခွာပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ထူထောင်ချင်ခဲ့ဟန်တူတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အသိတရားတွေဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ရိုက်ချိုးခဲ့ကြတယ်။
Drive ဇာတ်ကားကို သေချာကြည့်ပါက ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့စိတ်ပညာကို ထင်ဟပ်ပြသထားတဲ့ ဥပမာလိုပုံစံ သင်္ကေတဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Driver ဇာတ်ကောင် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ Jacket ရဲ့အနောက်က Scorpion ပုံသည် ထိုဇာတ်ကောင်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ သူရဲ့စိတ်သည် တည်ငြိမ်နေရာကနေ ရုတ်တရက် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် သဏ္ဍာန်ကို အချိန်တိုလေးအတွင်း အလျင်အမြန်ကူးပြောင်းနိူင်သည်။ ဓာတ်လှေကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကို ကြည့်ပါက သိနိင်ပါသည်။ တင်ပြသူ Director Nicolas Winding Refn ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုဇာတ်ကောင်ကို အပိတ်ဇာတ်ကောင်အသွင် ပရိသတ်ကို ချပြတယ်။ ဇာတ်ကောင်သည် စကားအများကြီးမပြော။ အတိတ်ကိုလည်း မသိ၊ ထို့အပြင် နာမည်တောင် မဖော်ပြခဲ့သလို ထိုဇာတ်ကောင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲ ရေးရေးလေး ပြသခဲ့သည်။
ဇာတ်လမ်းအလှည့်အပြောင်းမှာတော့ The Driver သည် လက်စားချေသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာတော့တယ်။ သူနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဆိုပေမဲ့ သူပါဝင်လာခြင်းသည် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ယခု သူရဲကောင်းများ စာရင်းတွင် မဖြစ်မနေ ထည့်လိုက်ရပေတော့သည်။ ရည်ရွယ်ချက် မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာတော့သည်။ သူသည် ထိုသားအမိလေး နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့ စစ်မှန်သော သူရဲကောင်းတစ်ဦးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့သူရဲကောင်း List ထဲတွင် ကမ္ဘာပေါ်ကမဟုတ်တဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော ဂြိုလ်သားဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ကတော့ Superman ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အင်အားအပြင်းဆုံး အသန်မာဆုံး အစွမ်းထက်ဆုံး အအောင်မြင်ဆုံး လူသိအများဆုံး Superhero ဆိုရင် Superman ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ချို့ကတော့ Batman ဇာတ်ကောင်နဲ့ယှဉ်ပြီး သူ့ကို ပျင်းရိဖို့ကောင်းတယ်၊ စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဇာတ်ကောင်အကြောင်းကို စာဖတ်သူ သေချာလေ့လာပါက ပို၍စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး အချက်က Superman ဟာ Superman ဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ Superman အဖြစ်ကို မွေးဖွားလာခဲ့တာ။ Clark Kent ဆိုတာ Superman ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်။ ပြောချင်တာက Clark Kent ကနေ Superman ဖြစ်လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ မွေးဖွားလာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့သူ။ ကမ္ဘာ့လူသားတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ သူဟာငယ်စဉ်က လူသားတွေနဲ့တစ်သားတည်းကျဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့စရိုက်နဲ့သူ့ပုံစံဟာ လူသားအသွင်ဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ခြားလူသားတွေနဲ့မတူကွဲပြားခဲ့တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘာလဲဆိုတာ လက်ခံလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူဟာ ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ အစွမ်းထက်ဆုံး လူစွမ်းကောင်းဖြစ်လာတော့တယ်။
သူသည် ဘယ်သောအခါမှ လူမသတ်။ (Man of Steel ကတော့ ခြွင်းချက်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပါ့မယ်။) သူဟာ လူသားတွေကို ခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်နဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်တယ်။ ငယ်စဉ်က သူ့အပေါ် အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကိုလည်း သူအငြိ ုးမထားခဲ့။ သူ့အပေါ်စော်ကားတဲ့ လူတွေကိုလည်း သူနားလည်ပေးနိင်ခဲ့တယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးနိူင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Superman သည် လူသားတွေကိုချစ်တယ်။ လူသားတွေရဲ့ပျော့ညံချက်တွေကို သူမရှာခဲ့။ လူသားတွေရဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကိုလည်း သူမရှာဖွေခဲ့။ သူရှာဖွေခဲ့တာက ထိုအပြစ်မကင်းတဲ့ လူသားတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားပဲ။ သူဟာ Krytonian တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူလည်း Krytonian တစ်ယောက်လို့မြင်ချင်မှ မြင်ပေတော့လိမ့်မည်။ လူသားတွေကြားမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သောကြောင့် သူသည် လူသားတစ်ယောက်ဟုပင် သူ့ရဲ့မသိစိတ်က စွဲမှတ်ထင်နေပေလိမ့်မည်။
ပရိသတ်တွေဟာ Superman ကို အရမ်း Perfect ဖြစ်လွန်းတယ်လို့ယူဆကြပေလိ့မည်။ အမှန်တော့ သူလည်း အပြစ်ကင်းသော သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေ။ Man of Steel မှာ သူ့ရဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ သူလုပ်တဲ့အရာတိုင်းဟာ အမြဲတမ်း မှန်ကန်ချင်မှ မှန်ကန်နေပေလိ့မ်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားတွေကိုတောင် သူချချင်ချတတ်ပေလိမ့်မယ်။ ဥပမာ General Zod ကို သတ်ခြင်းတွေကိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ သူ့အမှားတွေကနေသင်ယူတယ်။ ခုနောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ BVS ဇာတ်ကားမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို ပေါ်လာတယ်။ သူသည်လည်း လောကရဲ့ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကနေရတဲ့ သတ္တဝါတစ်ယောက် ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဘဝမှာ နာကျင်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ Batman ထက် ပို၍ နာကျင်ဖို့ကောင်းခဲ့တာတစ်ခုက သူဟာ မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်အစစ်ကို အသက်ရှိထင်ရှား မတွေ့ခဲ့ရသည့်အပြင် မွေးစားဖခင်လည်း ကိုလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လေကကြီးထဲကနေ စွန့်လွှန်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုနာကျင်မှုတွေက သူ့စိတ်ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ထိုနာကျင်မှုတွေ ကို စိတ်ထဲက မထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အပြင်ကိုတော့ သူဘယ်တော့မှ ထုတ်ဖော်မပြသခဲ့ဘူး။ သူ့ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကို အထင်ရှားဆုံးမြင်ခဲ့ရတာကတော့ Superman Returns ဇာတ်ကားတွင် သူ Lois Lane အပေါ်ထားရှိတဲ့ အချစ်ပဲ။ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ စိတ်ကို သူလူတွေ မမြင်အောင် မြိုသိပ်ခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ညဘက်တွေမှာ ထိုအိမ်လေးနားသွားပြီး ထိုမိသားစုလေးကို ငေးကြည့်နေတတ်တယ်။
ဇာတ်လမ်းတွေထဲတွင် သူ့ဇာတ်ကောင်ဟာ ချစ်တဲ့သူတွေများသလို မုန်းတဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူဟာ လူသားတွေအကုန်လုံးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သူမဟုတ်။ သူဟာ ဘုရားသခင်မှ မဟုတ်တာ။ သူကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေက ရှင်ခဲ့လို့မကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေ သေကြေခဲ့ရခြင်းကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေက အပြစ်ပြောဆိုတတ်ကြတာကို တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ သူဟာ ဘယ်သူသေ၊ ဘယ်သူရှင်ဆိုပြီး အမိန့်ချနိုင်တဲ့သူမှ မဟုတ်ခဲ့တာ။ အမှန်တော့သူဟာ သူ့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကိုပဲ တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်။ လူကယ်တင်နိုင်တဲ့ လူသားတိုင်းကို နေ့စဉ်ကယ်တင်ပေးတဲ့ အာဂလူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက်ပဲ မဟုတ်ပေလားဗျာ။ Superman ဟာ ဘာကြောင့် Greatest hero လို့သင်ယူဆပါသလဲ။ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကြောင့့်လား။ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူရွေးချယ်တဲ့လမ်း၊ သူရပ်တည်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့လူသားတွေအပေါ် သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးပြုမှုတွေကြောင့် သူဟာ Greatest Hero တစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းပဲ။
Dr. Ryan Stone (Gravity)
လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ကတော့ Gravity ဇာတ်ကားထဲက Dr. Ryan Stone ပါပဲ။ သူရဲကောင်းဆိုတာ တစ်ပါးသူကို ကယ်တင်မှ သူရဲကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်သူရဲကောင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေဆိုးတစ်ခုကို ကြုံတွေရပြီးနောက် သာမာန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သူမ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့တယ်။ သူမလိုက်ပါ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ Explorer ဆိုတဲ့အာကာသယာဉ်ဟာ Russian missile strike တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတော့ Chain reactions မှ လွင့်ပါလာသော အပျက်အဆီးအပိုင်းအစများနဲ့ထိတိုက်ပြီး ပျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်။ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူဆိုလို့သူမနဲ့Matt Kowalski ဆိုသော ကျန် အာကာသမှုးတစ်ယောက်ပဲ ရှိခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်နေရာတွင် ထိုသူကိုပါ သူမဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ သူမရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်း အသက်ရှင်ခြင်းအတွက် သူမအစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
သူမရဲ့နောက်ကွယ်က ဘဝတစ်ခုမှာတော့ သူမဟာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးကိုပါ ဆုံးရှံးနေရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဇာတ်လမ်းမှာ ပုံဖော်ခဲ့တယ်။ သူမကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝကလည်း သိပ်တော့ အားမရလှပေ။ သူမကို မွေးဖွားခဲ့စဉ်က ဖခင်ဖြစ်သူသည် ယောက်ျားလေးလိုချင်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ သူမကို မွေးဖွားလာခဲ့တော့သိပ်တော့ ကျေနပ်မယ်မထင်ခဲ့။
ခုလို ဟိုးလူတွေနဲ့ဝေးကွာလွန်းလှတဲ့ ကမ္ဘာပတ်လမ်းပေါ်က အာကာသပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ သူမတစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို သူမရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ကာ နောက်ဆုံးတွင် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ပြန်ကျရောက်ခဲ့တယ်။ ထိုဇာတ်ကားကို ကြည့်တော့ သူမဇာတ်ကောင်အဆုံးတွင် သေမယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့မိတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်သာ သူမနေရာမှာဆိုရင်လည်း အရှုံးပေးမိပြီး သေဆုံးခဲ့မှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမ မသေခဲ့ဘူး။ သူမအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ဉာဏ်တွေ ဝီရိယတွေ လုံလ ကြိုစားအားထုတ်မှုတွေ နဲ့သူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေ သူမမှာ ကိန်းအောင်းနေခဲ့တာကိုး။
သာမာန်လူသားတစ်ယောက်သည် သာမာန်ထက်ထူးခြားမွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာ Oskar Schindler က သက်သေထူပြခဲ့တယ်။ စာဖတ်သူ .. မိမိကိုယ်ကို မိမိပြန်မေးကြည့်ပါ။ ငါသာ Schindler နေရာမှာဆိုရင် သူလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ထိုအခြေအနေတစ်ခုမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာပဲ။ လမ်းမအလယ်ခေါင်မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်တွေ ပြောဆိုနေပြီး ဆန္ဒပြနေသူတွေဟာ သူရဲကောင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ။ စင်မြင့်တွေပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး မိန့်ခွန်းတွေချွေနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အစရှိတဲ့သူတွေဟာလည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူရဲကောင်းတွေ မဟုတ်ဘူး။ Oskar Schindler ဆိုတဲ့သူဟာ ယနေ့Israel နဲ့US တို့Europe တို့မှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ Jews လူမျိုးတွေအကုန်လုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်။
Zwitlau မှာ သူ့ကို April 28, 1908 မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ အဖေနဲ့အမေကရော ဘာသာရေးသမားတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းကာ ရိုသေခဲ့တယ်။ သူတို့မိသားစုဟာ ထိုခေတ်ထိုအချိန်ကတော့ ထိုနယ်ပယ်မှာ အချမ်းသာဆုံး မိသားစုတွေထဲက တစ်စုပေါ့။ သူရဲ့လူငယ်ဘဝတုန်းက ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့် သူဟာ အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ယောကျ်ားပျိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ကာ သမီးရည်းစားသက်တမ်း6ပတ်မျှသာ ရှိသေးတဲ့ Emilie ဆိုတဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ဦးနဲ့သူလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူအိမ်ထောင်ကျပြီး မကြာပါဘူး။ သူ့ဟာအရက်ကျေးကျွန်ဖြစ်လာကာ တစ်ခြားမိန်းမတွေနဲ့လည်း ဖောက်ပြန်မှုတွေ အရမ်းများလာခဲ့တယ်။ တရားဝင်မိန်းမနဲ့မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားမိန်းမတွေနဲ့ကလေး2ယောက်တောင် ရခဲ့တယ်။ 1929 ရဲ့ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကပ်ဆိုးကြီး ဖြစ်လာတော့ သူတို့မိသားစုရဲ့စက်ယန္တရားလုပ်ငန်းကြီးလည်း ရပ်စဲခဲ့ရကာ သူကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်လာသောကြောင့် Poland မှာ စက်ပစ္စည်း အရောင်းစာရေးအဖြစ် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူဟာ ကမ္ဘာမှာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာဟာ Jews လူသားပေါင်း 1200 ကျော်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့လို့ပဲ။ ထိုကဲ့သို့အရက်သမား စီးပွားရေးသမား မြာပွေဖောက်ပြန်ရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ 1939 မှာ Jews လူမျိုးတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး စတင်ခဲ့တယ်။ Krakow မြို့က Jew လူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ Companies2ခုကို သူဝယ်ယူခဲ့ကာ ထိုမြို့ပြင်မှာ စက်မှုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်တော့ Jew လူမျိုးအများစုကို သူအလုပ်သမားတွေအဖြစ် ခန့်တယ်။ အဲ့ဒီ့လိုနဲ့ထိုသူတွေကို အကျဉ်းစခန်းကနေ သူကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ 1942 မှာ သူ့ဆိုင်က Jews တွေအမြောက်အမြားနဲ့ထိုမြို့ထဲက Jews တွေအများစုဟာ ရက်စက်တဲ့အကျဉ်းစခန်းတွေကိုအပို့ခံနေရတယ်ဆိုတာ သူသိရတဲ့အခါ သူနဲ့သိတဲ့ German အာဏာပိုင်တွေဆီကနေ သူတောင်းဆိုခဲ့တာက သူ့စက်ရုံကြီးထဲတွင် ထိုလူတွေအတွက် အကျဉ်းစခန်းလာရောက် ထားရှိဖို့ပဲ။ သူဟာ ထိုသူတွေကို သူ့ဆီမှာ လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အတွက် အကျဉ်းစခန်းထက် မြောက်မြားစွာ သက်သာမှု ရှိစေခဲ့သည်။ ထိုအချက်တစ်ခုတည်းမှာတင် သူဟာ Jews လူပေါင်း 900 ကျော်ကို ကယ်တင်ပေးနိူင်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့သူဟာ Jews လူမျိုးတွေကို Germans တွေဆီကပြန်လည် ဝယ်ယူဖို့မြောက်မြားစွာသော ငွေကြေးတွေကို အသုံးချခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ထိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရပ်တွေကြောင့်2ကြိမ်တိုင်တိုင် အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ထိုသို့အဖမ်းခံရတိုင်းလည်း သူ့မှာ အကြောင်းပြချက်တွေ ပေးတာရော ငွေကြေးတွေ ပေးပြီး လာဘ်ထိုးကာ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။
သူကယ်တင်ခဲ့တာ သူဘဝတွင် မသိခဲ့သောသူတွေ။ သူဘာကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော ထောင်ပေါင်းများစွာသော Jews တွေကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ Germans တွေလက်ထဲက ကယ်တင်ခဲ့တာလဲ။ ထိုမေးခွန်းသည် မေးခွန်းပဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဖြေမရှိပါ။ သူ့ကိုဘာကြောင့်လို့မေးတိုင်း သူ့ဘဝတွင် ထိုလုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြေပြန်လည် မပေးခဲ့ပါ။ သူ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ ကယ်တင်ခဲ့ ကယ်တင်ခဲ့။ အမှန်တော့ သူကယ်တင်ခဲ့တာ လူ့အသက်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာပါ။ လူတစ်ချို့ကတော့ ပြောကြတယ်။ သူဟာ စွန့်စားရတာ ဝါသနာပါတဲ့သူတဲ့။ သူဟာ နေရာတိုင်းမှာ ဗဟိုနေရာကနေ ရပ်တည်ချင်တယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆို မင်းသားပေ့ါ။ ဒါကြောင့် ထိုကဲ့သို့တစ်ခြားသူများ မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို သူလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီမှာတင် သူဟာ ထိုနေရာကနေ ပြန်ထွက်လို့မရတော့တာတဲ့။
ကျွန်တော် အထက်ကမေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းကိုပြန်မေးရမယ်ဆိုရင် သင်ကိုယ်သင် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ တစ်ခြားလူပေါင်းများစွာအတွက် သင်ဟာ ဘာအကျိုးရလာဒ်မှ မရရှိပဲ အချိန်ကုန် ငွေကုန် သင်ကယ်တင် ကူညီဖို့ဆောင်ရွက်ပါ့မလား ဆိုတာပဲ။ အကျိုးရလာဒ်၊ အင်း.. အကျိုးရလာဒ်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ကူညီပြီးနောက် ဝမ်းသာကြည်နးတဲ့ ပီတိလေ။ ဒါဟာ အကျိုးရလာဒ်ပဲ။ သူ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူအဖြေမပေးခဲ့တာဟာ သူဟာ သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်ကြီးကို မလိုချင်လို့ပဲ။ သူဟာ လုပ်ရပ်တွေအတွက် အကျိုးတရားတွေ မလိုချင်ခဲ့ဘူး။ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေ လောင်းခဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပင် သူသည် သူရဲကောင်း အစစ်ဖြစ်ပေတော့သည်။ ဝမ်းနည်းဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့သမိုင်းမှာ လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွေမှာ စီးပွားပျက်ခဲ့ရတယ်။ သူဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော စည်းစိမ်တွေအကုန်လုံးကို သူသေခါနီးမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူ့ဘဝနိဂုံးကို9October 1974 နေ့တွင် ဇာတ်သိမ်းခဲ့တော့တယ်။
The Lord of the Rings ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထင်ကျန်နေရစ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ အမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ သူရဲကောင်းလို့စာတင်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ကတော့ Aragorn ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲ။ ထိုဇာတ်လမ်းထဲတွင် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ အရေးအပါဆုံးလုပ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ သတ္တိရေးရာ အပြောင်မြောက်ဆုံး ဉာဏ်ပညာအမြော်အမြင် အပြည့်စုံဆုံး အနစ်နာခံဆုံး သစ္စာအရှိဆုံး ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အနစ်နာခံတာနဲ့သစ္စာရှိတာကိုတော့ Sam က ပိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
လက်စွပ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့သူတို့လူစု ထွက်ခွာလာပြီးနောက် Balrog နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး Gandalf တစ်ယောက် တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကျသွားခဲ့တော့ ထိုလူစုကို သူတစ်ယောက်တည်း ဦးဆောင်ရတော့တယ်။ သူသည် Ranger တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် အတိုင်း ထိုနယ်ပယ်ဒေသကို ကျွမ်းကျင်ရုံသာမက Elves တွေနဲ့လည်း ခင်မင်ရင်နှီးမှုဟာ သူ့တို့အဖွဲ့အတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့အချက်တွေပဲ။ သူတို့လူစု Lothlorien ကို ဘေးကင်းစွာနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တာတွေဟာ Aragorn ရဲ့ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရည်တွေကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ထိုနေရာမှာ သူတို့လူစုကွဲသွားကြတော့ ဒါဟာ သူရဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ဖိအားကို တောင့်တင်းခံနိုင်မှုကို စမ်းသပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ လူသားတွေ elves တွေ dwarves တွေ ပြီးတော့ hobbits တွေ အစရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေကို ဦးဆောင်ရတဲ့ အလုပ်ဟာ လွယ်ကူတယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။
နောက်ထပ် သူ့ကိုသူရဲကောင်းလို့အမည်တပ်လို့ရမဲ့ ဥပမာတစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ကြင်နာမှုနဲ့ သစ္စာတရားပဲ။ Arwen နဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး သူမကို လက်ထပ်ဖို့ဂတိသစ္စာပြုခဲ့တဲ့ Aragorn တစ်ယောက် Eowyn ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ထိုအမျိုးသမီးက သူ့ကိုသဘောကျတာကြောင့် ချဉ်းကပ်ခြင်းတွေကို ညင်သာစွာနဲ့သူငြင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူ့ချစ်သူအပေါ်သစ္စာစောင့်သိခြင်းကို ပြသလို ကျန်တစ်ဖက်သားလူတစ်ယောက်ကိုလည်း ညင်သာစွာ ဆက်ဆံပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းဆိုလိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့် သူဟာ ပညာရှိတစ်ယောက်လို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး။
မိခင်ဖြစ်သူ Gilraen နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ တစ်ချိန်က ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Arathorn II တို့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့သွေးတွေမှာ မြင့်မြတ်ခြင်းတွေဟာ စီးဆင်းနေမှာပါ။ သူ့ကို March 1, T.A. 2931 နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ2နှစ်သားမှာ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ မိစ္ဆာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ သေဆုံးခဲ့တယ်။ ထို့နောက် သူ့ကို Elrond ကမွေးစားခဲ့ပြီး Isildur မျိုးရိုးဆိုတာကို လူတွေကို မသိစေခဲ့အောင် မိခင်ဖြစ်သူက ဖုံးအုပ်လျှို့ဝှက်ခဲ့တယ်။ ထို မျိုးဆက်ဆိုတာကို သူအရွယ်ရောက်သော 2951 ခုနှစ် မှာမှ သူကိုယ်တိုင် သိရှိခဲ့ရတယ်။ ထိုအချိန်မှ သူ့ကို Narsil လို့အမည်ရတဲ့ ဓားကိုအပ်နှင်းခဲ့ကြတယ်။ ထို့နောက် 2956 နှစ်မှာ Gandalf the Grey နဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ သူ့ဘေးကတစ်ခြားသူတွေဆီကို ကူးဆက်စေပါတယ်။ ဒါဟာ သူရဲကောင်းတွေတိုင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပဲ။ သူဟာ လက်စွပ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ကြံကြံခံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တော့ ရှိခဲ့ဟန်မတူ။ ဒါပေမဲ့ ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ Frodo ကိုတော့ သူကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ သူဟာ သူဦးဆောင်တဲ့လူသားတွေအပေါ်မှာ အမြဲတမ်း ဂရုတစိုက်ရှိလည်း ရှိခဲ့တယ်။ တိုက်ပွဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်းထန်ပြင်းထန်ပါစေ၊ သေခြင်းတရားဟာ သူ့အနားမှာပဲ ဝန်းရံနေပါစေ၊ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူထက် သူ့ရဲ့လူတွေကို ပိုဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဘုရင်သွေးပါသူဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်တုန်းကမှလည်း မာန်မာန မထောင်လွှားခဲ့ဘူး။ အခွင့်အထူးခံတွေကိုလည်း သူမယူဘူး။ လက်ရုံးရည်ကို ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလည်း သူဟာ တစ်ခြားသူတွေအကုန်လုံးထက်သာလွန်ပါတယ်။ Nazgûl လို5ကောင်ကိုတောင် သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သူမျိုး။ King of the Dead နဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတောင် ဆွယ်နိုင်ခဲ့သူ၊ Orc ခေါင်းဆောင်ကိုလည်း ခေါင်းဖြတ်နိုင်ခဲ့သူ။
ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ King Elessar ဆိုတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ချီးမြောက်ခြင်း ခံရတာ သူ့ရဲ စွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက် ထိုက်တန်လွန်းတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲပေါ့။
Star Wars ဟာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Franchise ဆိုရင် Obi-wan Kenobi ဟာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Star Wars ဇာတ်ကောင်ပဲ။ သူဟာ Star Wars Universe ရဲ့လူဆိုးကြီး Darth Vader (Anankin Skywalker) ရဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလို လူကောင်း Luke Skywalker ရဲ့ဆရာတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Star Wars ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေမှာ သူ့လောက်ကြိုးစားပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူး။ သူဟာ အကြိုးစားဆုံးဇာတ်ကောင်ပဲ။
သူ့ကို 57 BBY မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိသားစုနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပြီး Jedi တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူ့အသက် 13 နှစ်သားလောက်မှာ သူ့ကို Agricultural Corps ဆိုတဲ့ Force ကို အသုံးပြုလို့ရပေမဲ့ Padawans မဖြစ်လာတဲ့ ကလေးတွေကို ပို့တဲ့ နေရာကို အပို့ခံရတယ်။ ထိုလမ်းမှာပဲ သူဟာ Jedi Master တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Qui-Gon Jinn ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ Qui-Gon Jinn ဟာ အစကတော့ သူ့ကို Padawan အဖြစ် လက်ခံဖို့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပေမဲ့ သူရဲ့တပည့်အဖြစ် လက်ခံကာ Jedi တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။
Darth Maul နဲ့တိုက်ပွဲမှာ Qui-Gon Jinn တစ်ယောက် သေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ Darth Maul ကို အနိုင်ရရှိခဲ့မုှုကြောင့် Jedi Knight အဖြစ် မြှောက်စားခြင်းခံရတယ်။ သူဟာ အစကတည်းက Anankin Skywalker ကို The chosen one လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဆရာဖြစ်သူက သေခါနီးမှာ မှာကြားသွားခဲ့တာကြောင့် ဆရာဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံး ဆန္ဒကို လိုက်လျောချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူ Anakin Skywalker ကို Jedi တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သူသင်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူမလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အမှားတစ်ခုကို လုပ်ခဲ့ရတာပဲ။ နှစ်တွေ အနည်းငယ်ကြာပြီး Clone War ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Anakin Skywalker တစ်ယောက် Dark Side ကို ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကာ Jedi တွေအကုန်လုံးကို သတ်ခဲ့ပြီး Jedi Temple ကြီးကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်။ Obi-wan နဲ့Yoda တို့နှစ်ယောက်ပဲ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ သူ့တပည့်ဖြစ်သူကို သူကိုယ်တိုင် သွားရောက်နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ အမြင်မှန်ရဖို့လည်း သူဖြောင်းဖြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမုန်းတရားတွေ ကြီးထွားနေခဲ့တဲ့ Anakin ကို သူတရားချလို့မရခဲ့ဘူး။ တိုက်ပွဲမှာ သူအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ သေအံ့ဆဲဆဲ မိမိရဲ့တပည့်ကို မကြည့်ရက်တာကြောင့် သူမသတ်ပဲ ထားရစ်ခဲ့တယ်။ Anakin ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Luke နဲ့Leia ကို သူ လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကို ပို့ပေးစေခဲ့ပြန်တယ်။
ဒီလိုနဲ့သူဟာ Tatooine မှာပဲ ရှောင်ပုန်းရင်း ကျန်ရှိတဲ့အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်။ သူဟာအစတုန်းက သူနဲ့Yoda နှစ်ယောက်ပဲ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတွင် တစ်ခြား Jedi အမြောက်အမြားပါ Order 66 ရဲ့လုပ်ကြံမှုကြီးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ သိခဲ့တယ်။ 19 နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်မှာ Anakin Skywalker ရဲ့သားဖြစ်သူ Luke Skywalker နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကာ တပည့်ဖြစ်သူ Anakin (Darth Vader) ရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးခဲ့ရတော့တယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဘဝပဲ။
သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို့မြင်မိတယ်။ သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားသင်ချမှုတွေဟာပဲ ညံ့ဖျင်းလို့လားတော့ မသိ။ သူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူခဲ့သူ Anakin ဟာ လူဆိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါဟာ သူ့အပြစ်လို့မမြင်မိသလို သူ့ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှု ရှုံးနိမ့်မှုလို့မမြင်မိဘူး။ Anakin ကြံစည်နေခဲ့တာတွေကို သူမသိခဲ့ပေမဲ့ Anakin ကို သူအမြဲလိုလို မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကနေ တားမြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ကယ်တော့ သူဟာ တပည့်ဆိုးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ Anakin ကို ဂရုစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ငယ်ဘဝမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးချိန်တွင် သူဟာ ပျက်စီးသွားတဲ့ Aankin ကို ကြည့်ပြီး အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ မျက်ရည်တွေနဲ့ဝမ်းနည်းစွာ စကားတွေပြောခဲ့တယ်။
ဆိုပြီး သူမျက်ရည်တွေဝဲကာ ဝမ်းနည်းစွာ ပြောခဲ့တယ်။ မီးတောင်က မီးရည်ပူတွေ လောင်ကျွမ်းနေတဲ့နေရာမှာ ရှံးနိမ့်နေတဲ့ Anakin အတွက်တော့ပို၍မုန်းတီးစရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် Anakin က
လို့ကျယ်လောင်စွာ ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာ Obi-wan ကတော့
ဆိုပြီး ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ မိမိရဲ့ညီတစ်ယောက်လိုရော တပည့်တစ်ယောက်လိုရော ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်က မိမိကို မုန်းတီးနေတာကို သူအပြစ်မမြင်ရက်ခဲ့။ Anakin တစ်ယောက် လမ်းမှားစွာနဲ့အမှောင်ထုထဲကို ရောက်သွားရှာပြီဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့သူဝမ်းနည်းခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ထွက်ခွာခဲ့တော့တယ်။
Dec 6, 2020 1 min read Special Collection
HEROES (Part V)
Apr 24, 20194min read Special Collection